रोमाञ्चक खेलमा नेपाल एपिएफ क्लबलाई पराजित गर्दै त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा शनिबार भएको फाइनल भिडन्तमा आर्मीले एपिएफलाई ३३ रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसविरूद्ध नेपालमा पनि खोप लगाउन सुरू गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल सरूवा रोग अस्पतालबाट खोप अभियान सुरू गरेका छन्।
आज माघ १ गते अर्थात माघे संक्रान्ति पर्व। यो पर्व देशभर भव्यरुपमा मनाइन्छ। नेपालका विभिन्न जाति र समुदायले यस पर्वलाई आआफ्नै सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको रुपमा मनाउने गर्छन् । मगर समुदायमा यो पर्वलाई नयाँ वर्षको रुपमा पनि मनाइन्छ।
मनमा अलि चिसो पस्यो, यदि त्यो टुप्पो नै चम्पादेवी हो भने भष्मासुर डाँडा कति पर? र कति अग्लो होला? मनमा चिसो पस्नुको केही कारण थिए।
दिउँसै लालटिन बालेर विद्यार्थीले खोजे ओली सरकार! (तस्बिरहरू)